Air New Zealand ayaa soo bandhigtay video cusub oo ah 'Air All Blacks'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka New Zealand » Air New Zealand ayaa soo bandhigtay video cusub oo ah 'Air All Blacks'
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dalxiiska • Gaadiidka
Air New Zealand ayaa maanta soo saaray muuqaal video cusub oo nabadgelyo ah Dhamaan Naasaha iyagoo taageeraya kooxda inta lagu jiro xilli ciyaareedkooda 2019 iyo sida ay isugu diyaarinayaan Japan bisha soo socota.
Dhamaan Tababaraha Madow Steve Hansen oo ay weheliyaan Captain Kieran Read, Sam Cane, Anton Lienert-Brown iyo Ryan Crotty ayaa ku biiraya jilayaal kala duwan oo ku jira fiidiyowga badbaadada oo daawadayaasha u tagaya xarunta "diyaarad dhowaan la aasaasay" Air All Blacks halkaas oo fikradaha shirkadda fiidiyowga badbaadada koowaad ayaa laga wada hadlayaa.
Ka dib markii uu ku adkeystay inuu noqdo afhayeenka xiga ee Air New Zealand ka dib markii uu la safray shirkadda 2017, jilaaga Mareykanka Rick Hoffman ayaa sidoo kale ka muuqda fiidiyowga, iyo sidoo kale hogaamiyaha Kiwi ee Cliff Curtis.
Hoffman wuxuu sheegay in khibradihiisii ​​wanaagsanaa ee New Zealand iyo qosolkii qosolka badnaa ee Air New Zealand ay u ahayd kaar weyn oo uu ku jilayo muuqaalka.
Waan jeclahay New Zealand - cuntada waa mid layaableh dadkuna waa cajiib. Waa sida ay tahay inay ahaato meel kasta! Waan ku farxi doonaa in lay aqoonsado cajalada badbaadada ee Air New Zealand. ”
Dhisida shirkadda iskaashi labaatan sano ah oo ay la yeelatay New Zealand Rugby, fiidiyowga waxaa sidoo kale jilaya halyeeyo rugby 1987 Sir Michael Jones, Sir John Kirwan, Buck Shelford, Gary Whetton iyo David Kirk iyo Kabtankii hore ee Black Ferns Fiao'o Fa'amausili iyo sidoo kale Kabtankii hore ee Australia George Gregan.
Maareeyaha Guud ee Air New Zealand Global Brand & Content Marketing Jodi Williams ayaa sheegay in fiidiyowgii ugu dambeeyay uu yahay mustaqbal mustaqbal leh oo ku wajahan labo magac oo Kiwi caan ku ah oo isu imaanaya si ay adduunka u tusaan inta rugby-ga ku jira DNA-da.
“Bedelida magaceena oo loo badalo Air All Blacks waxay muujineysaa taageerada aan u heyno wiilasha madow. Dadkeenu waxay dareemayaan dareen sharaf oo ay ku duulayaan kooxda daafaha dunida, labada hay'adooduna waxay si joogto ah adduunka u tusayaan saamaynta weyn ee ay umad yar ku yeelan karto masraxa adduunka. ”
Sii deynta Air All Blacks waxay muujineysaa toban sano guuradii ka soo wareegtay markii shirkadda duulimaadyada qaaska ah ay ku qaadatay fiidiyowyada badbaadada, iyo qaabka dhabta ah ee Air New Zealand, fiidiyowgii ugu dambeeyay wuxuu maareeyaa inuu ku raaxeysto waxoogaa Kiwi oo jidka ku jira.
“Waa wax cajiib ah inaan u dabaaldegno xiddigaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah, taageerayaasha iyo kuwa aan iska leenahay Air New Zealand tobankii sano ee la soo dhaafay. Waxay ku habboon tahay oo kaliya in fiidiyowgaan uu soo nooleeyo wax si cad u muuqda New Zealand - laga soo bilaabo aasaaska Rippa Rugby illaa hilaaddii 1987 All Blacks, oo leh qaab casri ah oo gaar ah, ”ayay tiri Williams.
Ku darista safka caanka ah ee Kiwi, Air All Blacks waxaa taageeraya gaar ahaanta, asalka dhawaaqa aasaasiga ah, waddo cusub oo cusub oo ka socota kooxda New Zealand ee SIX60. Ka dhagayso barnaamijka 'Spotify' laga bilaabo Khamiista 8 Ogosto.